သင်၏ အဖွဲ့ အစည်းကို အောင်မြင်တိုးတက်စေမည့် အခြေခံစည်းမျဉ်း (၇)ခု | Shwe Canaan TV
သင်၏ အဖွဲ့ အစည်းကို အောင်မြင်တိုးတက်စေမည့် အခြေခံစည်းမျဉ်း (၇)ခု
10Unknown Wednesday, 18 May 2016
7 Basic Principles to develop Your Organization သင်သည် ပရဟိတဂေဟာ (သို့) အသင်းတော် တစ်ပါးပါး၊ ကျမ်းစာကျောင်း (သို့) ဘော်ဒါ ကျောင်း တစ်က...
7 Basic Principles to develop Your
သင်သည် ပရဟိတဂေဟာ (သို့) အသင်းတော်
တစ်ပါးပါး၊ ကျမ်းစာကျောင်း (သို့) ဘော်ဒါ ကျောင်း
တစ်ကျောင်း၊ လူတစ်စု (သို့) အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုခု
ကို ဦးဆောင်နေသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါ
က သင့်အတွက်အရေးကြီးသော မေးခွန်းတစ်ခုမှာ - “မိမိဦးဆောင်နေသော အဖွဲ့ အစည်းကို မည်ကဲ့သို့ သန်စွမ်းကြီးပွားတိုး
တက်လာစေနိုင်မည်နည်း ဟူ၍ပင် ဖြစ်သည်။ သည်အတွက် လျှို့ ၀ှက်ချက် (သို့) သော့ချက်တွေ ရှိပါသလား? ဟုတ်ကဲ့။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် သမ္မာကျမ်းစာ ထဲ၌ ရှာဖွေတွေ့ ရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော် တွေ့ ရှိသည့် အခြေခံစည်းမျဉ်း (၇)ချက်ကို ေ၀ငှသွားပါမည်။
၁။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆုတောင်း မေတ္တာ ပို့သပါ
Pray for one another in love
“ကာလအစဉ် စိတ်နှလုံးပါလျက် ဆုတောင်းပဌနာပြုခြင်း အမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် ဆုတောင်းကြလော့။ ထိုသို့ဆုတောင်းခြင်းငှာ အားမလျော့ဘဲလျက် ငါမှစ၍ သန့်ရှင်းသူ အပေါင်းတို့အဖို့ ဆုတောင်းလျက် စောင့်ရှောက်ကြလော့” (ဧဖက် ၆း၁၈)။
သင့်အဖွဲ့ အစည်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်လိုလျှင် အဖွဲ့ သားအားလုံးသည် ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သော သင့်အပေါ်တွင် ဗဟိုပြုခြင်းမျိုး မဖြစ်စေဘဲ အချင်းချင်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကြည့်ရှုစောင့် ရှောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက် သွန်သင်ပေးရမည်။ သည်အတွက် ပထမဆုံး လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရ မည့် အလေ့အထကို ပျိုးထောင်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
အချင်းချင်း ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးခြင်းမရှိလျှင် အချင်းချင်း ေ၀ဖန်ပြစ်တင်ခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့့ ရှုံ့ ချခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပြီး အဖွဲ့ အစည်း၏ ညီညွတ်မှုစွမ်းအားကို ယုတ်လျော့စေနိုင်သည်။ ထိုမျှမက စာတန်မာရ်နတ် ၀င်ရောက်ဖို့ ရန်အတွက် အခွင့်ပေးသကဲ့သို့ ဖြစ်တတ်သည်။ သင်၏ လူစုအတွင်း၌ အချင်းချင်း ဆုတောင်းပေးသည့် အလေ့အကျင့်ကို ပုံမှန်ပြုလုပ်နေပြီဆိုလျှင် သင့်အဖွဲ့ အစည်းသည် အောင်မြင်တိုးတက်မှု၏ အုတ်မြစ်ကို တည်ဆောက်ထားပြီး ဖြစ်သည်။
၂။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကူညီဖေးမပါ
“ကျေးဇူးပြုခြင်း၊ ဥစ္စေ၀မျှခြင်း၊ အမှုတို့ကို မမေ့မလျော့ကြနှင့်။ ထိုသို့သောယဇ်ကို ဘုရားသခင် သည် အားရနှစ်သက်တော်မူ၏” (ဟေဗြဲ ၁၃း၁၆)။
သင်ဦးဆောင်နေသော အဖွဲ့ အစည်း၌ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးရမည့် ဒုတိယအချက်မှာ အချင်းချင်း ကူညီဖေးမခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုက္ခရောက်သူ၊ ခက်ခဲသူ၊ အားနည်းသူများကို လျစ်လျူမရှုပဲ တတ်စွမ်းသ၍ ကူညီဖေးမဖို့ရန် နှိုးဆော်ရမည်။ သည်အရာအတွက် မိမိကိုယ်တိုင်က ပုံသက်သေ စံနမူ နာ ပြသရမည်။ “ဘယ်သူသေသေ၊ ငတေမာရင်ပြီးရော”ဆိုသည့် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သော၊ အတ္တကြီးသောသဘောကို ချိုးနှိမ်ဖို့ရန် သွန်သင်ပေးရမည်။
“သူတစ်ပါးကို ရေလောင်းသောသူသည် ကိုယ်တိုင်ရေလောင်းခြင်းအကျိုးကို ခံရလိမ့်မည်” ဆိုသည့် နိယာမကို လည်းကောင်း (သုတ္တံ ၁၁း၂၅)၊ “အငယ်ဆုံးသောသူ တစ်ယောက်အား ကြည့်ရှု ပြုစုခြင်းသည် ခရစ်တော်အား ကြည့်ရှုပြုစုခြင်းပင် ဖြစ်သည်” ဆိုသည့် အကြောင်းကိုလည်းကောင်း သွန်သင်ပေးရမည် (မဿဲ ၂၅း၄၀)။
၃။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အစေခံပါ
“ငါသည် သခင်ဖြစ်လျက် အရှင်ဘုရားဖြစ်လျက်နှင့် သင်တို့၏ခြေကို ဆေးလျှင် သင်တို့သည် အချင်းချင်းတို့၏ ခြေကို ဆေးရကြမည်” (ယောဟန် ၁၃း၁၄)။
လူ့သဘာ၀အရ သူတစ်ပါးကို စေခံခြင်းထက် မိမိကို သူတစ်ပါးက အစေခံပေးတာကို လိုလား ကြသည်။ ခေါင်းဆောင်မှု၏ စံနမူနာကို ပြသခဲ့သော ယေရှုခရစ်တော်သည် တပည့်တော်တို့၏ ခြေကို ဆေးလျက် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အစေခံဖို့ရန် မိန့်မှာခဲ့သည်။ အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုအတွင်း အချင်းချင်း အစေခံသည့်အခါ ခရစ်တော်၏ သဘောသဘာ၀များ ထင်ရှားလာပါသည်။ အဖွဲ့ အတွင်း၌ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ဗိုလ်ကျစိုးမိုးခြင်း၊ ကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်ခြင်း အလေ့အထ မရှိစေရန် ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
အချင်းချင်း ဧသည့်၀တ်ပြုခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ လုပ်အားဒါနပြုခြင်းတို့သည် အစေခံခြင်း၏ အသီးအပွင့်လက္ခဏာများပင် ဖြစ်သည်။
၄။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန် လေးစားပါ
“သူတစ်ပါးသည် ကိုယ့်ထက်သာ၍ ကောင်းမြတ်သည်ဟု နှိမ့်ချသောစိတ်ရှိ၍ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ထင်မှတ်ကြလော့” (ဖိလိပိ္ပ ၂း၃ခ)။
အဖွဲ့ အတွင်း၌ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန်လေးစားမှု (Mutual respect) ရှိမှသာ အဖွဲ့ ၏ ဂုဏ်ကျက်သရေကို မြင့်တက်စေပါသည် အဖွဲ့ ၀င်အချင်းချင်း အထင်အမြင်သေးခြင်း၊ နေရာမပေးခြင်း တို့သည် အဖွဲ့ ၏ကျစ်လစ်မှုနှင့် ကြီးထွားမှုကို လျော့နည်းစေသည်။ “ကျီးကို ဘုတ်ရုတ်ရိုသေ” ဟူသော စကားအတိုင်း သူ့ အမူအရာကို အလေးအနက်ထာခြင်းနှင့် ချိုသာယဉ်ကျေးသောစကားဖြင့် ပြောဆို ဆက်ဆံခြင်းတို့သည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန် ရိုသေလေးစားမှုကို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။
လူအသီးသီးတို့သည် ဘုရားသခင်ပေးသနားသည့် မတူညီသောဆုကျေးဇူး အသီးသီးရှိ ကြသည်ဖြစ်ရာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရိုသေခန့်ငြားလျှက် အမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်ဖို့ရန် သွန်သင်လေ့ကျင့် ပေးဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
၅။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နားလည် ခွင့်လွှတ် ပေးပါ
Understand and forgive one another
“အချင်းချင်း ကျေးဇူးပြုခြင်း၊ သနားစုံမက်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်ကြောင့် သင်တို့အပြစ်ကို လွှတ်တော်မူသကဲ့သို့ အချင်းချင်း အပြစ်လွှတ်ခြင်း ရှိကြလော့” (ဧဖက် ၄း၃၂)။
လူတိုင်း အားနည်းချက်ကိုယ်စီ ရှိကြပါ၏။ အမှားနှင့် ကင်းသောလူဟူ၍ မရှိချေ။ သခင်ယေရှု၏ တပည့်တော် ပေတရုက “ညီအစ်ကိုတို့သည် အကျွနု်ပ်ကို ပြစ်မှားလျှင် ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင် လွှတ်ရ မည်လော”ဟု မေးလျှောက်သည့်အခါ “ယေရှုက အကြိမ်ခုနှစ်ဆယ်ခုနှစ်လီ မြောက်အောင် လွှတ် ရမည်” ဟု ဆိုခဲ့သည် (မဿဲ ၁၈း၂၁-၂၂)။ အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခု၌ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခွင့်လွှတ်ခြင်း မရှိ လျှင် နာကြည်းခြင်းများ၊ ခါးသည်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အဖွဲ့ အစည်းကို ပြိုကွဲစေနိုင်သည်ကို သတိ ပြုပါ။
အချင်းချင်း နားလည်ပေးဖို့နှင့် ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့အတွက် အခြေခံမှာ ဘုရားမေတ္တာနှင့် ကျေးဇူး တော်ကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရားသင်ပေးသော ပဌနာတော်၌ ပါရှိသည့် “ကျွနု်ပ်တို့သည် သူတစ်ပါးအပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်သကဲ့သို့ ကျွနု်ပ်တို့၏အပြစ်ကို လွှတ်တော်မူပါ” ဆိုသည့် ဆုတောင်း၀န်ခံချက်ကို လက်တွေ့ ကျင့်သုံးဖို့ နှိုးဆော်ရမည်။
၆။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ချီမွမ်း ဂုဏ်ပြုပါ
“ချီးမွမ်းခြင်းအရာမှာ သူတစ်ပါးကို ကိုယ့်ထက် ချီးမြှောက်ကြလော့”
ကျွန်တော်တို့ အတော်များများဖြစ်တတ်သည့် အရာတစ်ခုမှာ သူတစ်ပါးကို ချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုခြင်း ထက် မိမိကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူဝါကြွားခြင်း ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုစကား ပြောကြား ခြင်းသည် စိတ်ဓါတ်ခွန်အားကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အပြုသဘောဆောင်သော ဆုံးမပြစ်တင်ခြင်း လိုအပ်သော်လည်း ချီးမွမ်းဂုဏ်ပြု စကားပြောခြင်း၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အသိအမှတ်ပြု ခြင်းတို့ကို သာ၍ လိုအပ်ပါသည်။ သည်အလေ့အထကို အဖွဲ့ အတွင်း၌ ကျင့်သားရစေရန် ပြုလုပ် ပေးရမည်။ ကျေးဇူးပြုသောသူအား ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုခြင်းကိုလည်း စံနမူနာအဖြစ် အများရှေ့ တွင် ပြုလုပ်အပ်ပေသည်။
၇။ အချင်းချင်း စည်းလုံးစွာဖြင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပါ
“အသင့်အတင့် ပေါင်းဖော်ခြင်း အဖွဲ့ အစည်းအားဖြင့် သင်တို့သည် အချင်းချင်း စိတ်သဘော မခြားနား၊ တလုံးတ၀တည်း ဖြစ်အ့ံသောငှာ ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့” (ဧဖက် ၄း၃)။
အာဖရိကစကားပုံတစ်ခု ရှိသည်။ “သင်သည် မြန်မြန်ပြေးလိုလျှင် တစ်ဦးတည်းပြေးပါ။ (သို့မဟုတ်) ေ၀းေ၀းပြေးလိုလျှင်မူကား အတူတကွ ပြေးပါ” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အသင်းအဖွဲ့ တစ်ခုစီ တိုင်းတွင် ရှုပါရုံ ပန်းတိုင် ကိုယ်စီရှိကြပါသည်။ သည်ရှုပါရုံဆီိိိ အရောက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက် တစ်ဦး ကောင်း တစ်ယောက်ကောင်းဖြင့် မရနိုင်ပေ။ တစ်လှေတည်းစီး၊ တစ်ခရီးတည်းသွားသည်ဆိုလျှင် အားလုံး ညီညွတ်စွာ လှော်ခတ်နိုင်ပါမှ ပန်း၀င်နိုင်မည်။
စည်းလုံးမှုကို ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် မိမိအကြိုက်၊ မိမိနှစ်သက်ရာ သြဝါဒကို ဆုပ်ကိုင်ထား၍ မရပါ။ ဘုံတူညီချက် (Common ground) တစ်ခုခုကို အမြဲရှာဖွေရမည်။ အဖွဲ့ ၏စည်းလုံးမှုကို ပြိုကွဲစေမည့် လုပ်ရပ်များများကို ကြိုတင်တားဆီးရမည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နှိမ့်ချခြင်းသည်လည်း ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ပင် ဖြစ်သည်။ ဘောလုံးကစားနည်းကဲ့သို့ပင် တစ် သင်းလုံး၊ တစ်ဖွဲ့ လုံး စည်းလုံးညီညွတ်မှုအားဖြင့်သာ အောင်မြင်မှုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ပါသည်။
သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ဘုရား၏ မစမှုတန်ခိုးဖြင့် အထက်ပါ ၀ိညာဉ်ရေးရာ စည်းမျဉ်းများအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်လျှင် သင့်အဖွဲ့ အစည်းသည် ပိုမိုသန်စွမ်း ကြီးထွားလာ မည်မှာ ဧကန်မလွဲပင် ဖြစ်ပါသည်။
မေတ္တာဖြင့် - Rev. သိန်းသန်းထွန်း
The King Casino is owned by British casino ventureberg.com/ operator Crown Resorts and operated by หาเงินออนไลน์ Crown Resorts. ford escape titanium It is owned by British ADDRESS: CASTLE 바카라 사이트
Shwe Canaan TV: သင်၏ အဖွဲ့ အစည်းကို အောင်မြင်တိုးတက်စေမည့် အခြေခံစည်းမျဉ်း (၇)ခု